About Us - Hospital Yiling Shijiazhuang
Waa maxay more, Yiling leeyahay koox cilmi-baaris xoog leh, oo ka kooban 29 aqoonyahano ee Shiinaha, oo ay ku jiraan khubaro kale aqoonyahanada dalka ku soo laabtay, khubaro ajnabi ah, dhakhaatiir, sayidyadooda iyo cayn kasta oo shaqaale xirfad leh.
Yiling shirkadda dawooyinka , dawooyinka Chinese shirkadaha ku qoran 50 (Stock Code: 002603), leh khadka saarka casriga ah ee kaabsal, kaabsal oo jilicsan, kiniin, granule, duray dareere iwm, ayaa cilmi halis ah oo wax soo saarka, ay ka mid yihiin: TCM, waxyaabaha daryeelka caafimaadka, daawooyinka galbeedka iyo xaleef TCM iwm
Daroogada patent Qaar ka mid ah gaar ahaan burada (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) kaabsol, taas oo saameyn cad oo xoog leh oo ah bukaanka kansarka. Bishii Oktoobar 2017, Research Center Caafimaadka, aasaasay by Group Company Yiling iyo Jaamacadda Cardiff ee UK ayaa la aasaasay muddo 4 sano ah.
Xaruntu waxay horumarisa isgaarsiinta qoto dheer iyo iskaashiga ee daawada Chinese ka dhanka ah cilmi-buro, codsiga clinical & qaybsiga khayraadka suuqa. Waxaa horumariyo cilmi nidaamka qoto dheer in daawo Chinese YangZhengXiaoJi kaabsol, taas oo uu ku cadaato in si waxtar leh la xakameeyo kartaa noocyo kala duwan oo metastasis buro, joogsada xididdada dhiigga ku cusboonaataan buro, iyada oo ay hoggaaminayaan ee aragtida cudurka dammiin.
ShenLingLan, nooc kale oo daroogada anticancer, qayb qaaliga ah ee daawo-dhaqameed Chinese ku haboon yahay bukaan ah oo leh labo deficiency of caajisnimo iyo kelyaha, Stasis dhiigga iyo raasamaal sun hor iyo ka dib radiotherapy iyo chemotherapy. Waxaa hagaajin kartaa daal maskaxeed, daal, caajisnimada, miisaanka jidhka iyo wixii la mid ah.
JinLiDa granule, nooca 2 diabetes mellitus deficiency Qamaan iyo yin syndrome, calaamadaha, oomman oo ay cabbaan, polyorexia, kaadida, jidhka si tartiib tartiib ah oo khafiif ah, daal, dhidid, Fanre, calool iwm
kaabsoosha kelyaha tonifying Bazi, tonifying kelyaha iyo kululaaneysa a. Khusayso kelyaha deficiency a keeno dhexda iyo jilibka xanuun, wareer iyo tinnitus, Shenpi daal, halmaan, Carar si qabow.
kaabsal Jujuboside Oil. Mid ka mid ah cuntada caafimaadka nooc dhigay qaab kaabsal, Zizyphus saliid yaruna jujube soo gaabin karaa wakhtiga qarsoon hurdo, iyo in la kordhiyo waqtiga iyo heerka la ruxruxo gaabis ah hurdo, hurdo kuwaas gacmeed iyo hurdo weyn. Waxaa run ahaantii ka shaqeeya. Waraaqaha badan ayaa lagu sheegay.
By hadda, waxyaabaha Yiling ayaa la dhoofiyo South Korea, Vietnam, England, Canada, Netherlands, Singapore, Russia iyo wixii la mid ah.
Hospital Yiling 20 sano ee horumarinta by aadamiga iyo soohdin ka dib markii uu noqday casriga ah, daawo Chinese iyo Western weheliso isbitaalka dhafan taas oo heerka ugu sareeya ka shaqeeya TCM ee Shiinaha.
Daaweynta atrophy muruqa daraasad cusub oo ka mid ah ka hortagga iyo xakameynta diiradda Chinese qaranka dhaqanka ku takhasusay maamulka daawo Chinese - atrophy muruqyada ah takhasus diiradda qaranka maamulka daawo Chinese dhaqanka, salka atrophy muruqa sii waxbarashada, heegan u ah cudurka neuron motor, daweeyay gravis, muruqa cudurka Dystrophy iyo sclerosis iyo cudurro kale dareemayaasha.
Department of rheumatology Gobolka Hebei qaaska ah ee muhiimka ah ee daawo Chinese dhaqanka, isticmaalka daaweynta gudaha iyo dibadda, iyo gaari saamayn wanaagsan ee daaweynta ee scleroderma, polymyositis, Sjögren syndrome, cudurka Behcet ee, laabotooyinka, cudurada rheumatoid, cudurka spondylitis ankylosing by isku dhafan ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah.
Waaxda kansarka (加链接) isku TCM iyo galbeedka daawo, si guul leh loola dhaqmo kun oo bukaan ah oo kansar adduunka oo dhan. Waayo, marxaladaha kala duwan ee bukaanka kansarka ay qaataan hababka daaweynta kala duwan, si ay u caawiyaan bukaanada loo hagaajiyo nidaamka difaaca jirka, loo hagaajiyo WBC, kor loo qaado tayada nool iyo nolol dheeraan. Gaar ahaan wanaagsan at daaweynta kansarka naasaha, kansarka mindhicirka, kansarka qanjirka 'prostate, kansarka sanbabada, kansarka gastric iyo kansarada kale.
Xarunta Caafimaadka Yiling : Town Health Yiling la 'waarididda dhaqanka rahaamad ilaalinta caafimaadka' hanuun ayaa isku qasin ilaalinta caafimaadka aragnimo dhaqanka, ilaalinta caafimaadka aragnimo mashruuca, maamulka caafimaadka, daawooyinka ciyaaray, hurdo caafimaadka, ilaalinta caafimaadka iyo fasax-garaynta, shopping caafimaadka iyo ganacsiga bandhig iyo madal one-stop ilaalinta caafimaadka.
A hotel shan xiddig, hotel ugu horeysay theme caafimaadka ee Shiinaha, waxa uu leeyahay makhaayad Chinese iyo makhaayad cunto Western, waxaa jira Westgate caafimaadka waxa ku jira. function asaasiga ah, waxa ugu gaar ah oo ku saabsan Xarunta Caafimaadka Yiling, waxaa ku shaqeeya ku takhasusay TCM iyo khubarada kala duwan oo ka shaqeeya cudur oo kala duwan.
Halkan waxa aad la kulmi karaan deegaanka ku nool ugu raaxo, khubarada inta badan masuulka ka ah iyo khibrad qaadan doonaa daryeel caafimaadkaaga.
Yiling Medical Center Imtixaanka , baaritaan caafimaad oo casri ah, waxa ay leedahay xarunta maamulka caafimaadka deegaanka xarrago leh qalabka sare si aad ku raaxaysan karaan daaweynta VIP ah.
mashaariicda baaritaan Calaamadaha waxaa ka mid ah: hubi network iyo baadho, ayaa gorgorraduna ciyaari xaaladda caafimaad ee iskaanka jidhka ah, ogaanshaha xididka xididada dhiigga oo dhan, dhibic ogaado dhiig, ogaanshaha hiddo, baaritaanka halista sonkorowga, aqoonsiga TCM Dastuurka.
Yiling Agency Travel International, waxay bixisaa adeeg visa, conselltion caymiska, tigidhada, adeegga jaale hotel, adeegga dalxiiska caalamiga ah iyo waxyaabo kale oo hay'adda socdaalka adeegga.
Bukaanka : aad iman kari iyo aad u hesho daaweynta isku dhafan, labada TCM & Western Medicine, iyo cunto, hoy, layliyo, teraabiyada cilminafsiga, dhammaan dhinacyada saameeya caafimaadka loo qaadan karaa qorshaha daaweynta our.
Waayo, dadka caafimaadka-sub : aad caafimaad, kaliya ma caafimaad oo ku filan, waxaad u baahan tahay nasasho fiican, nidaminayo ku haboon oo ku saabsan caafimaadkaaga, kaalay oo ku nool Xarunta Caafimaadka Yiling, waxaanu isticmaali doonaa TCM in ay is ogow oo idinka mid ah.
Waayo, dadka u baahan baaritaan caafimaad oo joogto ah : yimaadaan oo ay ka heli safarka caafimaad, waxaan noqon doonaa khabiir maamulka caafimaadka nolosha oo dhan. Waxaan alarm digniinta hore u ah caafimaadkaaga doono, daweeyo caafimaadka-hoosaadka ka hor imaatinkiisa galay cudurka.
Wax walba oo aad u baahan tahay in la abuuro website a qurux badan